Maitiro ekuvharira vokukurukura muTeregiramu uye uzive kana vakakuvharira | IPhone nhau
Nacho Aragonese | | IPhone maapplication
Kure nekunyanya kushandiswa kwemeseji maapplication kana masocial network zvakanyanya kutarisana nemavhidhiyo nemifananidzo, Teregiramu iri kuzvimisikidza seimwe yemamwe maapplication kune ese maitiro Kubva kumapoka ezviuru zvevanhu, kuishandisa seyakaganhurirwa uye yemahara yega gore, kuenda kuburikidza, zvakapusa, kutaura neshamwari dzaunogona kushandisa kubva kune chero chishandiso uye usingatore nzvimbo mune chero, iwo ari mudiki muenzaniso wevazhinji nzira dzekushandisa Teregiramu.
Asi nekushandisa kunouya mutoro. Tichangobva kukuudza zvese nezve kukiya muWhatsApp Uye ikozvino inguva yekudzidza zvese nezve kukiya paTeregiramu.
1 Ndinovharira sei mumwe munhu?
2 Chii chinoitika kana ndavharira mumwe munhu?
3 Ndinoziva sei kana ini ndakavharirwa?
4 Nzira yekuziva sei kuti yako account yanga yakaganhurirwa uye zvekuita?
Ndinovharira sei mumwe munhu?
Zvinogoneka kuti mumwe munhu wawanga usingade kuti akubate, ane. Inogona kunge iri yekare yekuzivana, yawakadzivisa pane mamwe maratidziro, kana anogona kunge ari mutorwa akakunyorera iwe neako alias.
Nenzira aliases kana @Username zviri pachena kune wese munhu. Zvakare neprofile foto rako uye zita rawakaisa (unogona kuisa chero chaunoda). Saka kana iwe uchida kuenda usingazivikanwe, zvakanakisa kusave nemabhero uye kuisa mufananidzo wefaira uyo usingaoneke kana, zvakananga, kwete kuisa chero.
Asi zvitore nyore nhamba yako yefoni inongowanikwa chete mune zvinotevera mamiriro:
- Kana vatove nenhamba yako yefoni yakachengetwa mumabookbook avo.
- Kana iwe uchigovana yako nhamba pachako (uchishandisa "Govera nhamba yangu")
- Kana iwe uine yavo nhamba yakachengetwa mune yako ajenda uye iwe unovatumira iwo meseji kana kuvasheedza (sekunge sekunge vakagamuchira SMS kana kufona kubva kwauri).
Ivo havazoone yako nhamba pasi pemamwe mamiriro ezvinhu, senge kana iwe ukawanikwa uchishandisa kutsvaga kwepasirese kana muboka rehurukuro.
Muzviitiko izvi zvatakasangana nazvo uye isu tisingade, Chinhu chekutanga chatinofanira kuita tinya pane "spam". Ndiwo meseji unoonekwa kumusoro kwenyaya nyowani yakavhurwa nemunhu iyeye. Ichi chiito chinovhara mushandisi uye zvakare inonyevera Teregiramu. Kana vamwe vashandisi vakazivisawo kuonana se spam, account yako inogumirwa kwenguva pfupi kana nekusingaperi.
Kana isu tichida kuvharidzira mushandisi asina kutibata kana akatombozviita asi isu hatina kupa "spam", zvakapusa Tinofanira kuenda kuTeregiramu Masethingi> Chengetedzo uye zvakavanzika> "Vavharidzirwa vashandisi". Ikoko tinokwanisa kuwedzera zvitsva, kana kugadzirisa izvo zvakatovharirwa. Tinogona zvakare kuzviita kubva kune chat kana kubva kune ruzivo rweakataurwa mushandisi, iyo isu yatinowana nekudzvanya pane yavo profile mufananidzo. Tichaona sarudzo ye "block mushandisi" mune tsvuku pazasi.
Tinogona zvakare kumhan'ara chiteshi uye mapoka se spam. Panguva ipi neipi, kana tikapinda muboka kana mugero, nekudzvanya pazita, menyu ichaonekwa yatinga "taura". Kana izvi zvangoitwa, zvinotibvisa kubva muboka kana chiteshi, kwavasingazokwanise kutiwedzera zvakare. Kana iwe uchidemba kudzvanya "mushumo", ivo vanofanirwa kukutumira iwe yekukoka chinongedzo uye woigamuchira iyo kuti ipinde zvakare.
Uye zvechokwadi, iwe unogona zvakare kuvharira bots.
Chii chinoitika kana ndavharira mumwe munhu?
Paunovhara kuonana, ivo hauchakwanise kukutumira mameseji (hapana machete akavanzika), hapana mafoni. Izvo zvakare hazvizokwanise kukuwedzera iwe kumapoka. Chii chimwe, ivo havazokwanisa kuona yako profile mufananidzo kana yako online chinzvimbo (iwe uchagara uchiratidza se "kekupedzisira nguva refu yapfuura"?
Ndinoziva sei kana ini ndakavharirwa?
Iko hakuna nzira yekuziva zvechokwadi, asi panogara paine zviratidzo. Kana wavharirwa zvinoitika kwauri izvozvo iwo mameseji aunotumira anogara achisara nechikwekwe. Iwe haugone kuona iyo pikicha pikicha (iyo, kana iwe waona kare, chiratidzo chakanyatsojeka chekuti wavharidzirwa) uye hauzokwanisi kuziva yavo yekupedzisira yekubatanidza nguva futi. Hongu, zvakangofanana zvakafanana nezvinoitika kana iwe uchivharira mumwe munhu, asi uchiona kubva kune rimwe divi.
Nzira yekuziva sei kuti yako account yanga yakaganhurirwa uye zvekuita?
Izvo zvinokwanisika kuti iwe une rakakiya kuaccount yako uye kuti haubvumidzwe kunyorera kune vausingazive, kugadzira uye kukoka vanhu kuzviteshi uye mapoka, nezvimwe. Izvo zvisingawanzoitika kuti vanoisa zviyero paakaundi yako nekushandisa zvakajairika, asi kana tikapfuura, semuenzaniso, kugadzira mapoka uye nekuwedzera vanhu kuboka pasina mvumo yavo, zvinokwanisika kuti tinogumira account yeTeregiramu.
Iyo yekumisikidzwa inogona kuve yenguva pfupi, zuva rimwe, vhiki imwe, kana inogona kuve isingaperi (zvachose). Chero zvazvingaitika, unofanirwa kubata bot @spambot (imwe yeakaverengeka maakaunzi akavezwa aunowana paTeregiramu). Iye anokuudza zvese nezve yako block uye iwe unogona kugunun'una kana iwe uchifunga kuti haina kururamisa kana yanga iri kukanganisa.
Kune chero imwe mhando yedambudziko, kusahadzika kana mubvunzo une chekuita neTeregiramu, une runyorwa rwe inowanzo bvunzwa mibvunzo uye, kana zvese zvimwe zvikatadza, rangarira izvo ine inoshamisa mushandisi rutsigiro. Kubva pane zvigadziriro zvechero ipi yeTeregiramu maapplication, tinya pane "Bvunza mubvunzo" uye vanozvipira veTeregiramu vachakupindura.
Download | Telegraph X
Download | teregiramu
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Zvese nezve mabhuru muTeregiramu
Kana ndikavanza nhare mbozha yangu pateregiramu, uye ndikatumira meseji kune munhu ari pateregiramu, munhu iyeye anogona kundivhara kana ndisina iyo yakavanda nhamba?
Kana uchinge wavharwa muteregiramu unogona kudzoreredza mameseji akatumirwa.
Pindura kuna Isa
Kutengeswa kwe "kugadziridzwa" iPhone kuri kuwedzera uye kunokanganisa matemu eApple